Planet Saturn :: Mapuraneti Nhasi -
Iyo Planet Saturn
Saturn kuenzanisa nenyika
Saturn ndiyo yechitanhatu padyo nyika kune Zuva. Ndiyo nyika yechipiri pakukura muchadenga ine nharaunda yakapetwa ka9 yepasi (makiromita 57,000) uye neupamhi kakapetwa ka95 kepasi.
Saturn inotenderera Zuva kamwe chete makore makumi maviri nemapfumbamwe (angangoita mamirioni mazana gumi nemana emakiromita) uye inowanzo kuve negasi (96% hydrogen uye 3% helium) uye inofungidzirwa kuve nedombo repakati rakakomberedzwa negungwa remvura yesimbi metallic hydrogen iyo inoumba bhora mamwe makiromita 56,000 muhupamhi. Iwo ekumusoro akaturikidzana anofungidzirwa kuti ane mvura yemvura, ammonium hydrosulfide, hydrogen uye helium.
Musimboti weSaturn unopisa (11 700 degrees C) uye unogadzira kupisa kwakawanda kupfuura kwaunowana kubva kuSuva. Kuenderera mberi kubva pakati pemapuraneti, kushomeka kwetembiricha ine tembiricha inosvika kwakatenderedza -180 madhigirii mudenga repamusoro, uye 0 madhigirii C pakakomberedza 350km kudzika.
Makore egirazi eSaturn akafanana neaya eJupiter kunze kwekunge mabhendi asina kusimba uye akafara. Saturn zvakare ine pfupi inorarama asi nguva nenguva dutu inonzi huru chena gwapa iyo inoita kunge inoitika yega yega Mugovera.
Saturn inotenderera panguva ingangosvika maawa gumi nemaminitsi makumi matatu nemana. Icho chaicho chimiro (senge chese magasi mahombe) hachina chokwadi sezvo paine nzira dzinoverengeka dzekuyera kutenderera kwemuviri usina zvimiro zvakagadziriswa zvinoonekwa.
cancer murume anodanana nekenza mukadzi
Saturn ndeyechokwadi inonyanya kuzivikanwa neayo mhete system. Izvi zvakatanga kuonekwa naGalileo Galilei muna 1610 uyo, zvinonzwisisika, akavhiringidzika navo uye akafunga kuti Saturn aive achiperekedzwa nemamwe mapuraneti maviri aigara mativi ese. Muna 1655 Christian Huygens achishandisa teresikopu yakavandudzwa akakwanisa kuona ruzivo rwakakwana kuratidza kuti paive nemhete yakapoteredza Saturn.
Mhete idzi dzinowedzera kubva pa7000km kusvika pa120,000km pamusoro pechiso cheSaturn. Zvinoshamisa, ivo vanofungidzirwa kuve vari pakati pe1 km kusvika gumi metres gobvu inoumbwa zvikuru echando zvikamu zvinosvika muhukuru kubva paguruva kusvika kumatombo mamamita mashoma kuyambuka. Mipendero iri muzvindori inokonzerwa nemagetsi anokonzereswa nemwedzi yaSaturn, uyezve ne'mwedzi 'mikuru iyo inogara muzvindori inokonzeresa kuti zvidimbu zvinyurudzirwe mumatanho akasungwa. Ongororo dzichangoburwa dzakaona kuti kune kumwe kukanganisa mumarin'i achikonzera kuti ma particles amuke mamwe makiromita mana kubva mundege yakajairika nekuda kwekutenderera kweimwe mwedzi. Mhete idzi dzinofungidzirwa kuti ndidzo zvisaririra zvemwedzi zvakaparadzwa munzira kana nekungosara nezvinhu zvakasara nekuumbwa kwenzvimbo dzezuva.
Mwedzi: Titan ... uye nevamwe
Saturn ane 82 mwedzi (kubva munaGumiguru, 2019 pakawanikwa mwedzi mitsva makumi maviri) nemanomwe chete ari akakura zvakakwana kuita denderedzwa muchimiro. Pari zvino pakukura pamwedzi yese yaSaturn ndiTitan iyo yakakura kupfuura nyika yeMercury, uye mwedzi wechipiri mukurusa mune rezuva (Jupiter's Ganymede ari mukurusa). Titan iri makiromita mashanu nezana nemakumi mashanu emamiriyoni pakureba uye ine mhepo yakaoma ye nitrogen nematanho emethane. Iine nyanza hombe dzemvura methane / ethane pamusoro payo uye inogona kunge iine nzvimbo yepasi pegungwa yemvura yemvura iyo inombopota ichienda kumusoro.
zvinorevei kubhururuka muzviroto zvako
Mwedzi mitsva yakawanikwa. Ongorora: Makwikwi Ekutumidza Mwedzi izvozvi apera, asi isu takamirira kuburitswa kwemazita matsva.
Vhidhiyo huru inoongorora Titan.
Mwedzi unotevera wakakura kuenda kuTitan ndiRhea iyo ine dhayamita ye1,530km (30% Titans dhayamita). Icho chando muviri (75% chando, 25% dombo) ine yakanyanya cratered pamusoro. Imwe mimwe mwedzi yeSaturn inowanzove nehunhu hwakafanana ihwohwo hunoumbwa kazhinji kazhinji nechando nedombo uye zvese zvichinyanyo nyudzwa. Mwedzi miviri yakakurumbira inosanganisira Mimas inoratidza crater ine radius 1/3 iyo yemwedzi, Iapetus iyo ine mavara anoyevedza nerimwe divi riri dema sedota uye rimwe rakachena sechando. Aya mavara anofungidzirwa kuti ndiwo mhedzisiro yezvimedu zvinokandwa kumusoro kubva kune zvinokanganisa pamwedzi Phoebe iyo yaive muhotera reIapetus. Sezvo Iapetus yaipfuura nepakati pezvimedu izvi zvakaiswa panzvimbo inotungamira yeIapetus zvichikonzera kusviba.
Saturn akatumidzwa zita revamwari veRoma Saturnus (zvakaenzana namwari wechiGiriki Cronus) aive mwari wekurima nekukohwa.
Saturn yakatanga kushanyirwa nechombo chengarava chePioneer 11 muna 1979 chakawana pakati pezvimwe zvinhu mamwe maringi muhuringi system, uye mwedzi Epimetheus iyo yainenge (mukati me4000km) yakabatana nayo.
MaVoyager probes ndiwo akatevera kudzidza Saturn naVoyager 1 vachitora mifananidzo yekutanga yeSaturn, mhete dzayo nemwedzi muna 1980. Voyager 2 yakatora mimwe mifananidzo muna 1981 asi kukundikana mukamera yayo yekunongedza kugona kwakakonzera kurasikirwa nemifananidzo yaitarisirwa.
Muna 2004 iyo Cassini chitundumusere-musere yakave yekutanga probe yekupinda munzira yekukomberedza yakatenderedza Saturn ichiburitsa iyo Huygens probe iyo yakapinda muTitans mhepo kutanga kwaNdira 2005. Huygens probe yakabudirira kumhara pamusoro peTitan ichidzosera zvifananidzo uye data panguva yaro yekuburuka uye kubva pamusoro. Cassini yakagadzira yakawanda kubhururuka-pasts yemwedzi weSaturn uye maringi masisitimu achigadzira zvakawanda zvitsva zvitsva zvinosanganisira mhete nyowani nemamiriro ekunze. Chikwata cheCassini chinotarisirwa kuenderera mberi nekudzidza nzira yeSaturnian kusvika muna 2017 pachizopunzika nemaune muSaturn.
Cassini Spacecraft - Mazuva mana paSaturn
Cassini-Huygens Mifananidzo yeSaturnian System : Mifananidzo yakanakisa yeSaturn nemhete dzayo neMwedzi.
Mifananidzo yeVoyager yeSaturn
mamiriro azvino epasi akakomberedza zuva
ZVINOTEVERA: URANUS CHETE: JUPITER
Iyo Basics ... chii chinonzi nyika?
Pasi (iyo kufa nyika)
aries mukadzi nekenza murume hukama kuenderana
nhamba 44 inorevei mubhaibheri
chii chinonzi jupita chinzvimbo kubva kuzuva
kurota uchiita miscarriage uine nhumbu
celtic mapfumo dhizaini uye zvadzinoreva